China Custom logo loko pirinty kafe 350g taratasy fotsy boaty ivelany mpamokatra sy mpamatsy | Huaguang
Karazan-taratasy: karatra fotsy
Antsipirian'ny fonosana: 50 pcs ao anaty polybag na ny zavatra takinao
Habetsahana (boaty) 1 - 5000 5001 - 50000 > 50000
Fiarad boaty fonosana no be mpampiasa. Ohatra, amin'ny sehatry ny sakafo dia misy fiara kafed boaty, fiara vatomamyd boaty, fiara cookied boaty sns. Ny indostrian'ny hatsaran-tarehy dia betsaka kokoa, toy ny boaty kara-lokomena, boaty saron-tava,toner boaty karatra sy ny sisa; Eo koa ny indostrian'ny kiraro sy akanjo, toy ny ba kiraro, akanjo, atin'akanjo sns. Raha ampitahaina amin'ny boaty fanomezana, mora kokoa ny boaty karatra, ary azo aforitra ny boaty karatra, izay mahavonjy ny vidin'ny fitaterana. Ary ny boaty karatra dia tsara toy ny boaty fanomezana amin'ny lafiny famolavolana, kalitao ary endrika ivelany. Androany, andao hizara boaty karatra mahafinaritra:
1. Ny boaty karatra dia azo atao boaty fanomezana ihany koa, amin'ny fampiasana karatra fotsy 400g, pirinty miloko efatra, UV ampahany, sarimihetsika matte manarona ny tontolon'ny boaty, famonoana boaty iray manontolo, boaty fametahana marika, raha ampitahaina amin'ny boaty fanomezana. mitovy ihany, saingy hafa ny tsapany.
2. Fonosana boaty ho an'ny karatra sakafo, fitaovana fiarovana tontolo iainana natambatra, taratasy karatra sakafo manokana 350 grama, sarimihetsika matte, tsy misy fametahana, azo aforitra anaty boaty, tsy mila miahiahy momba ilay boaty fa handoto sakafo.
3. karatra fotsy 350 grama, fanontana loko efatra, ny ambonin'ny sarimihetsika matte, aorian'ny aforitra dia mety ho lasa boaty polygonal card, sokafy ny fonosana boaty hametrahana siramamy sambatra, lamaody sy tsara tarehy.
4. Karatra fotsy 300g, pirinty loko + fanontam-pirinty efatra, aorian'ny famolavolana maty, horonantsary matte ambonimbony, miaraka amina kibay.
5. taratasy grama 350 grama, fanontana miloko panty CMYK +2 amboniny, volafotsy mafana + eo an-toerana, vongana, fahatsapana tsy fitoviana, ary solika mihodina, tsy maninona ny loko sy ny volony, mampiseho mazava ireo vokatra avo lenta sy tsiro; ampidiro miaraka amin'ny pirinty vita amin'ny loko pantong 1mm vita amin'ny loko pirinty, aorian'ny famonoana maty hanamboarana ny vokatra.
6. Karatra fotsy 300 grama, loko pantong 2 + pirinty loko CMYK, pirinty loko avo lenta, tsy hanambany ny fisehoan'ny boaty; UV eo an-toerana, manasongadina ny toetran'ny vokatra, ny rakotra sarimihetsika matte ao anaty boaty aorian'ny atmosfera avo lenta.
7. karatra fotsy 300g ny tontolo iainana, fanontana 3 pantong + CMYK, loko mamirapiratra dia tsy ho lasa loko ampahany, tototry ny rano amin'ny UV eo an-toerana, asehoy ny toetra mampiavaka ny vokatra, fonony anatiny misy sarimihetsika malefaka, aorian'ny aforitra ao anaty boaty madio sy mahasalama nefa tsy very tonony.
8. taratasy grama 300 grama, loko pantong 2 + fanontam-pirinty CMYK, hahazoana antoka fa mazava ny lokon'ny fanontam-pirinty fa tsy loko miloko, LOGO mipoitra aorian'ny vokany miharihary miharihary kokoa, miaraka amin'ny fanontana ny loko pantong an'ny fampidirana mitafo hanamboarana ny vokatra, manatsara ny haavon'ny vokatra, aorian'ny famonoana maty, ny boaty vokatra farany.
9. Karatra fotsy 300 grama, tsy manify, sarimihetsika matte fonosana CMYK fanontam-pirinty, mateza ary tsy simba mora foana, amin'ny farany dia maty miendrika boaty hazo.
10. Karatra volafotsy matte 300 grama, mitsambikina ranomainty fotsy (tsy mila manonta ranomainty fotsy ny toerana eo an-toerana), ary manao pirinty CMYK + loko pantong 2, hahazoana antoka ny boaty miloko fanamiana, sy menaka mivadika, manao ny volafotsy loko misy faritra boaty mamiratra kokoa, volafotsy mitete mafana LOGO, raha misy jiro, loko maivana taratra, maty amin'ny fanapahana boaty iray, vokatra raikitra misy fotsifotsy ao anatiny.
11. 400 g karatra fotsy, CMYK +2 fanontana loko pantong, hahazoana antoka fa tsy mitongilana ny lokon'ny boaty, ny rakotra sary mihetsika matte, ny flash eo an-toerana UV, ny toerana sasany dia misy effets convex, ny endrika ankapobeny amin'ny boaty dia mendri-kaja sy kanto, mirindra kokoa.
12. taratasy grama 350 grama, fanontana loko pantong CMYK +2, loko ambonin'ilay boaty milamina sy mamirapiratra, hahazoana antoka ny fitovian'ny loko, ny lokon'ny pantong ampiasaina amin'ny toerana sasany, ny ambonin'ny menaka matte, na ny famirapiratan'ny taratasy voalohany na ny ranomainty fanontam-pirinty dia hahena, ary hiaro ny boaty, miaraka amin'ny vokatra mampiditra vokatra raikitra.
13. Karatra fotsy 300 grama, CMYK +2 fanontana loko pantong, fandrindrana tonga lafatra, dia tsy maintsy miantoka ny lokon'ny sombin'ilay boaty fanamiana, ny rakotra sarimihetsika malefaka, ny tanana dia samy hafa tanteraka, ny UV eo an-toerana dia manasongadina ny toetran'ny vokatra, miaraka amina fampidirana andiam-balibontsina, ny farany dia hokapahina anaty boaty.
Teo aloha: Kitapo taratasy fikarakarana hoditra dia ampidirina amin'ny boaty karazana boky PVC
Manaraka: Fitaovana vaovao lafo vidy antsinjarany fanodinana matihanina fanontana manonta gloss poakaty fanomezana fonosana boaty